Portfolio Diversification futhi Unbalancing - Blockchain Izindaba
Uma umtshali wemali uyobe usimisé saqina lunqunywe isifiso sabo ukutshala cryptocurrencies futhi wafunda wonke nomkhakha we zemali ezithakazelisayo, kuba isikhathi sokucabanga isakhiwo Ngokuzayo iphothifoliyo yokutshala izimali.
Kuvele iphothifoliyo utshalomali iqoqo izimpahla mfihlo eqoqwe ukufeza omunye umgomo ngesimo inzuzo. Into, ngezinye izikhathi ukuziphatha emakethe abizele izimo ezinjalo, lapho kulondolozwe amafa ezikhona isivele ukunqoba enkulu. Ngakho-ke, lapho ukwakha iphothifoliyo, kubalulekile ukuba sinake hhayi kuphela abangahle uhlamvu oluthile, kodwa futhi izindlela abahola ukuthi izipesheli mfihlo emakethe. futhi, kunjalo, yinto yokugcina ukwenza lufakwa zonke imali yakho endaweni eyodwa uhlamvu lwemali olulodwa ngethemba lokuthi kuzokwenza isicebi mfihlo.
Fast and ezethusayo vs. Eside Easy
evamile, amasu utshalomali kungenziwa ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili. ukutshalwa kwezimali eside akhethwa zimali olandelanayo, abakulungele umhlatshelo inzuzo esheshayo (ngokukhuluma ngokungagwegwesi, sithanda emakethe mfihlo salokho). Okuningi abahlanganyeli emakethe ukugembula ancike nolaka ukuhweba yesikhathi esifushane, ethembisa engenayo umbani-fast kanye ingozi eliphezulu yokulahlekelwa yikho konke ngesikhathi esisodwa.
Umgodlagodla i utshalomali zingase zimiswe ngesisekelo ngala masu ezimbili, sokuhlukanisa wonke amalungu afanayo cryptocurrencies ku eside futhi short-term abathandekayo. Kubalulekile nokukhumbula, Nokho, ukuthi uma obuhlala isikhathi eside, zemali okuthembekile umane ithengwe futhi walindela ngenxa intengo yawo yokuqeda amarekhodi, ke mali yesikhathi esifushane, noma kunjalo, kuyodingeka bagxuma eziyisisekelo zokubala emkhakheni we ukuhweba, ufunde imithetho yawo futhi amasiko emakethe, eziyisisekelo zokubala emkhakheni we ukuhlaziywa lobuchwepheshe, futhi ngokuzikhandla ukuqapha ngemuva izindaba wemakethe mfihlo.
Musa futhi sikhohlwe iqiniso lokuthi ngisho uhlamvu ezibonakala okuthembekile singaziphatha ngokungathi ngendlela ezingafanelekile evele ngena ekujuleni amanani. Abantu abathenge Bitcoin ngoba $19,000 neze manje bakubheka njengodumo noma utshalomali okuthembekile. Emakethe emakethe, kanye nokutshalwa eside zidinga ukubekezela Spartan kanye kwagcizelela ukhonkolo isimiso sezinzwa. Hhayi ukulahlekelwa ingqondo hhayi ukudayisa wonke amafa ayatholakala ngentengo obuncane umsebenzi oyinhloko umtshali wemali uyobe ongenile emakethe ngoba ngokuhamba kwesikhathi.
Phakathi Bears futhi Bulls
Enye yezindlela edidayo kakhulu tshala izingozi ukuthatha isikhundla phakathi izinkunzi namabhere, sokuhlukanisa amafa ngendlela ukuthi unokuthile ukwenzani kokubili bullish kanye izitayela bearish. Kunengozi eliphezulu jerking phakathi nenye ngoba kufanele unqume ukuthi ufuna ukujoyina smart noma handsome. Ngaphezu kwalokho, bambalwa abantu uphathe ukushintshela ubuchopho babo phakathi okulindelwe nokuwa we kwempahla mfihlo. Njengomthetho, kokuthi nalo nefa, Ngifuna ukukholelwa ukuthi yonke nobunzima zingezesikhashana, emagrafu afihle okuthile, nohlamvu lwemali imayelana aqhume amakhandlela phezulu.
Lokhu kungalingani kuyoba ofanele zimali nongenanembeza asenesikhathi eside ukholo izimangaliso, bakuqondisise amasignali wemakethe, futhi bayakwazi ukubikezela ukuziphatha kokubili inkunzi yokwamukela izivakashi bear.
Ayikho Shame e yokweba
Uzokwazi ukuba awagweme amaphutha amaningi uma ngaphambi kokuba utshale ongayifunda kokuhlangenwe nakho kwalabo baye kudala emakethe. Ngenhlanhla, zikhona izimali eziningi evulekile, lapho zimali ukushicilela ulwazi mayelana nezikhundla zawo mfihlo nsuku zonke. Bheka ukuthi ibhulogi noma yocingo isiteshi, okuyinto uthola mnandi. Nakani ukuzinza iphothifoliyo, nenqubo ngawo zemali zifakwa ke, futhi ukuziphatha zimali uma yokujama tsi wemakethe. Ifomu iphothifoliyo yakho by Isifaniso nalelo iphothifoliyo futhi, uma kunesidingo, ukulandela izincomo yilowo otshale izimali mayelana ukuthengwa kwempahla entsha.
Indlela yesibili hhayi ezihilela ukuvula ubuchopho is zokulandela izincomo wabathengi. Kuze kube manje, kukhona amashumi amaningana bot mfihlo, okuyinto kwimodi nsuku ukunikeza izimpawu ukuthenga noma ukuthengisa kwempahla ethile mfihlo, ekhombisa ingxenye yawo wonke lomgodlagodla, elandelayo okuzokwenza ukunciphisa izingozi. Omunye umbuzo ukuthi ayaziwa ngokuthi izimfanelo abahwebi ngemuva izicelo empeleni, akekho umuntu ukukuvikela ukuba nesandla kulokhu mass amaphampu kanye izindawo zokulahla, futhi uma kwenzeka ukwehluleka, ungakwazi kuphela ugxeka lokusebenza efonini yakho.
Ukubuyela amathuba Amaholo, okuyinto emakethe mfihlo inikeza, okukodwa kokukhethwa kukho ezifanele kakhulu unbalancing kuphothifoliyo kuyinto ukusatshalaliswa amafa zokutshala imali. Lena yindlela professional izimali utshalomali umsebenzi.
Lolu hlobo iphothifoliyo angase izobukeka ngale ndlela:
25% zemali ophambili yokutshala imali isikhathi eside (BTC, Eth, XRP);
25% ukuhweba esimaphakathi e altcoins phezulu;
10% ukulamula umbango robotized;
10% ukuhweba amarobhothi kanye nokuhweba algorithmic;
10% ngidayisa ezindabeni (ngomkhondo Ezenze inzuzo futhi Abanqotshiwe);
10% izimali ICOs ethembisa;
10% ephezulu mfihlo amafa.
Amaphesenti ukwabelana kuphothifoliyo enjalo kuzoncika owazi kahle ukuthi wena isu ezithile utshalomali futhi yeka indlela okufaneleka ngayo ngoba isimo lanamuhla emakethe mfihlo.
Iphothifoliyo mfihlo zingase zimiswe futhi esekelwe ezifundeni utshalomali njengendlela nsuku zonke ukushintsha ajenda ngokomthethonkambiso zezomthetho cryptocurrency emhlabeni kungaba ngokuphawulekayo nomthelela amazinga. Ningathemba ingxenye iphothifoliyo ukuze umphathi sikhwama, Nokho, esimweni esinjalo, kuzodingeka bakhokhe iphesenti yenzuzo wathola.
Noma kunjalo, kanye kwakhiwa, iphothifoliyo mfihlo ongeke ukukhonze kukho konke ukuphila kwakho. It kuyodingeka ibuyekezwe futhi “kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo” nezinguquko emakethe, nge ukubukeka zemali entsha othembisayo oqine, futhi, ekugcineni, ne yokujama tsi wemakethe, lapho ngisho amafa abathembeke kakhulu mfihlo kubangele isifiso ukuthengisa konke futhi begudluzana Fiat imali phezulu Stocking.
Thumela Previous:Imibala States of Benetton iqala ngokwamukela cryptocurrency e Lithuania
Thumela Landelayo:Korea Regulator kubikwa oda 12 cryptocurrency Ukuhwebelana kubuketa izivumelwano ikhasimende
April 17, 2018 ngesikhathi 5:00 PM
May 15, 2018 ngesikhathi 3:54 AM
May 28, 2018 ngesikhathi 12:40 PM
Juni 4, 2018 ngesikhathi 9:53 PM
Crypto Izindaba 19.10.2018